Bolivia: Bilaogera notendrena ho ao amin’ny Fitsarana Fifidianam-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2018 3:53 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny janoary 2008)
Amin'ny ankapobeny ny firaisamonin'ny bilaogy boliviana manohana ny mpikambana ao aminy. Vao haingana ny bilaogera fanta-daza iray no notendrena hoe amin'ny toerana ambony iray ao amin'ny governemanta boliviana. Raha ny tokony ho izy dia tokony ho maro ny fanohanana sy ny fiarahabana tamin'izany fanendrena vaovao izany. Nefa maro tamin'ireo bilaogera no nanontany raha mety ho amin'ilay toerana vaovao nanendrena azy ilay bilaogera, notendrena hitarika ny Fitsarana Fifidianam-Pirenena (CNE raha amin'ny fanafohezanteny espaniola) manko izy.
Tamin'ny fotoana nanendren'ny filoha Evo Morales an'i José Luis Exeni, bilaogera vitsy dia vitsy no (te-hanohitra) nanontany ny fahavitany mitarika izany andrim-panjakana izany na ny fizàran-draharaha ananany amin'izany. Maro dia maro no nanontany tena raha mpikambana ao amin'ny Movimiento Al Socialismo (MAS), ny antoko mitondra, i Exeni ary manontany ihany koa raha afa-manakona ny fijeriny amin'ny fizotram-pifidianana ho avy izy. Notondroin-dry zareo tamin'izany ny fandraisany anjara tamin'ny Hetsika Montoneros Movement, izay nanangonana ireo bilaogera izay nanambara ampahibemaso ny fanohanany ilay lalampanorenena mampiady hevitra nolaninana tao amin'ny antenimieram-panorenana. Mbola handalo fitsapan-kevi-bahoaka holaniana na hotsipahina io lalampanorenana io, ary ny CNE no hanatontosa ny fanaraha-maso izany.
Nisy ny sasany izay nanondro io fifandraisana akaiky amin'ny antoko MAS io ho zava-mampanahy. Mihevitra i Miguel Buitrago ao amin'ny MABB fa hanome vahana an'i Morales ny fananana olom-pantatra ao amin'ny Fitsaram-Pifidianana ao anatin'ny fotoana maharitra.
Fantatry ny olona tsara ny toerana misy an'i Exeni ao amin'ny tontolom-bilaogy boliviana, ary voaasa ho mpandray ny mpanoratra tao amin'ny ffiraisamonim-bilaogy boliviana Blogs de Bolivia [es] izy. Nikatona ny bilaoginy Fadocracia [es] (amin'izao fotoana izao) ary tsy hita ny zavatra efa nosoratany tany aloha. Vantany vao notendrena tamin'ny toerany vaovao i Exeni, dia nasehon'i Sebastian Molina ny pikantsarin'ny Fadocracia, izay hita ho nofafana tanteraka. Na izany aza dia voaverina ho amin'ny toetra misy azy amin'izao fotoana izao io bilaogy io andro vitsivitsy taty aoriana.
Angamba ny fanjavonan'ny lahatsoratra bilaogy no marika fa fantatry Exeni tsara ny filàna ahitana azy ho tsy mitongilana. Na dia milaza amin'ny rehetra aza ny namana bilaogera Vero fa tsy mpikambana ao amin'ny antoko MAS i Exeni [es], dia tsy matoky izany loatra ny hafa. Maneho hevitra ny hafa fa voajanahary eo amin'ny olombelona ny fananany fijery politika azy manokana ary manana ny eritreriny manokana amin'ny tolo-dalàmpanorenena i Salvador Romero filohan'i CNE amin'izao fotoana izao [es].
Avy amin'ny gazety La Razón:
Nanontany ny heviny amin'ny tolo-dalampanorenana nankatoavin'ny MAS sy ny mpiaradia aminy i Exeni fa tsy nety naneho hevitra. “Telo andro lasa izay (nialoha ny nanendrena ahy teo amin'ny toerana), ho tamim-pifaliana no nanolorako ny hevitro.”